3 Software Iji jikọọ Android ka Mac Mfe
1. Jikọọ Android ka Mac
2. mmekọrịta Android na Mac
5. Mbido Android ADB
Dị nnọọ plugged na eriri USB na-esi gị Android ekwentị ma ọ bụ mbadamba jikọọ Mac, ma ọ dịghị ihe mere? Nke ahụ bụ eziokwu. Mac apụghị ịchọpụta ma na-aghọta Android ekwentị ma ọ bụ mbadamba, ka naanị efego ya dị ka ihe mpụga ike mbanye. Ọ bụrụ na ka nke a, bụ omume na-nyefee music, listi ọkpụkpọ, fim, foto na ndị ọzọ faịlụ na site na gị Android ekwentị ma ọ bụ mbadamba on Mac? Olee otú i nwere ike ime ya?
Ọfọn, iji Android on Mac, ị nwere ike ise nkwado site na ụfọdụ-atọ ndị ọzọ ngwaọrụ. Ebe a na-3 nke ha: Wondershare TunesGo maka Android, Android File Nyefee na Samsung Kies maka Mac. Na akụkụ 1, ga-amasị m ewebata 3 software gị na nkọwa.
Part 1. 3 Software ka mfe Jikọọ Android ka Mac Part 2. Nzọụkwụ na-nzọụkwụ Guide maka USB Tethering nke Android ka Mac
Part 1. 3 Software ka mfe Jikọọ Android ka Mac
1. Wondershare TunesGo maka Android (Mac) 2. Android File Nyefee 3. Samsung Kies 3 n'ihi na Mac
1. Wondershare TunesGo maka Android (Mac)
Dị nnọọ na-awụlikwa elu ụgbọ mmiri si iPhone, iPad ma ọ bụ iPod ka ihe gam akporo ngwaọrụ, dị ka Google Nexus 5, ma echekwara tọn songs, ihe nkiri na iTunes nke ị na-achọghị ịhapụ? Dị ka iji iTunes jikwaa gị niile media faịlụ na ọkụ n'obi mbubata listi ọkpụkpọ na vidiyo si gị gam akporo ngwaọrụ ya n'ihi egwu? Ọ bụrụ na nke ahụ bụ ihe ị chọrọ, Wondershare TunesGo maka Android (Mac) bụ ihe kasị mma software maka gị. Ọ dị mfe na-eji software, nke na-ahapụ gị mmekọrịta media faịlụ n'etiti iTunes / Mac na gam akporo ngwaọrụ enweghị ihe ọ bụla hassle.
1. Mmekọrịta dum iTunes n'ọbá akwụkwọ ka Android na otu click
2. Mmekọrịta ma ọ bụ Dọrọ na dobe họrọ songs, listi ọkpụkpọ, fim na ndị ọzọ si na iTunes ka Android.
3. Nyefee Android media faịlụ ka iTunes dị mfe dị ka achịcha.
4. Detuo music, videos, akwụkwọ faịlụ na foto site na Mac ka Android site Ịdọrọ na idobe.
Njikọ otú: Ọ na-ahapụ gị gam akporo ngwaọrụ jikọọ Mac na Android eriri USB.
1. Ọ nwere mkpirikpi interface.
2. Ị bụ ọkà na-eji ya ọbụna na gị mbụ na-agbalị.
3. Ọ na-akwado 2000 + gam akporo ngwaọrụ, gụnyere Samsung, Sony, Google, HTC, Motorola, LG, Huawei na ndị ọzọ.
4. Ọ bụ n'ụzọ zuru ezu dakọtara na Android (site Android 2.1 ka Android 4.4).
Cons: Ọ bụghị free.
2. Android File Nyefee
Android File Nyefee na-kere Google, tumadi ji n'ihi na ị na jikwaa gị Android ngwaọrụ na Mac kpam kpam. Ọ nwere ike na-efego gị gam akporo ngwaọrụ dị ka mpụga ike mbanye, otú i nwere ike nyefee data si gam akporo ka Mac na Anglịkan.
1. Ugwu gị gam akporo ngwaọrụ dị ka ihe mpụga ike mbanye.
2. Mepee ọ bụla na nchekwa ma ọ bụ faịlụ echekwara na SD kaadị nke gị android ngwaọrụ.
3. Nyefee music, video, foto na akwụkwọ faịlụ na site na Mac.
Njikọ otú: Ọ na-ekwe ejikọta Android ka Mac site na Android eriri USB.
1. Ọ bụ free.
2. Ị nwere mfe ohere ka SD kaadị nke gị android ngwaọrụ.
1. Ọ nwere ike na-eji mgbe Samsung Kies arụnyere.
2. Ọ na-ada ada na-ịchọpụta gị android ngwaọrụ.
3. Ọ na-akwado Android 3.0 na elu.
3. Samsung Kies 3 n'ihi na Mac
Samsung Kies 3 n'ihi na Mac na-kere Samsung,-enyere gị aka jikwaa gị Samsung ngwaọrụ na Mac for free. Na ya, i nwere ike nyefee kọntaktị, music, video na kọntaktị na site na gị gam akporo ngwaọrụ, na nkwado ma weghachite ekwentị data na kwalite femụwe.
1. Import na mbupụ music, video, kọntaktị, foto na pọdkastị.
2. Ndabere ọdịnaya na gị Samsung ngwaọrụ Mac na weghachite n'enweghị.
3. Ịzụta ngwa site Galaxy égwu gị Samsung Galaxy ngwaọrụ.
4. Nweta nkwalite ndị ọhụrụ femụwe n'ihi na gị Samsung ngwaọrụ.
Njikọ otú: Ọ na ejikọ Android ekwentị Mac na eriri USB.
1. Ọ bụ kpam kpam free.
2. O nwere ọtụtụ salient na nke gị jikwaa gị Samsung ngwaọrụ.
1. Ọ na-akwado Samsung ngwaọrụ.
2. Ọ na-ada ada na-jikọọ gị Samsung ngwaọrụ.
Part 2. Nzọụkwụ na-nzọụkwụ Guide maka USB Tethering nke Android ka Mac
Ị nwere ike tether gị gam akporo ngwaọrụ gị Mac na n'ihi na ị ga-enwe iji atọ ọzọ na-ngwa. Lee, m na-eji HoRNDIS ka ọzọ ngwa. Ị nwere ike ibudata ọhụrụ version nke HoRNDIS.
Mgbe nbudata ya, ị kwesịrị ị na wụnye ya na gị Mac na mgbe ahụ jikọọ gị Android ekwentị gaa na Mac iji data USB. Ugbu a si na ngosi menu tinye Ntọala na gị android ngwaọrụ.
Mgbe ahụ gaa Ikuku & Networks na ngwaọrụ gị dị ka e gosiri na n'aka ekpe nke n'elu foto ebe ị ga-aka na Tethering & Portable Hotspot. Mgbe ahụ a ọhụrụ menu ga-apụta dị foto dị na n'akụkụ aka nri. Dị ka e gosiri n'ebe Họrọ USB TETHERING na mgbe ahụ, gị Android ngwaọrụ ga-tethered na Mac. Cheta, ị ga-ejikọrịrị a data ma ọ bụ wifi netwọk na-eme ka ọrụ a.
Mmekọrịta Android ka Mac Ịlụ All Files
Top 4 iTunes Alternatives maka Android
Nyefee Music si iTunes ka Android
Best iTunes maka Android Software maka Ị
Best 3 SyncMate Alternatives
Transfe Music si iTunes ka Nexus 5/7/4
Mmekọrịta iTunes na Android
3 Ụzọ nyefee iTunes Music ka Samsung
2 Ụzọ Detuo iTunes Music ka HTC
Best 3 iSyncr Alternatives
Best 4 doubleTwist Alternatives
Top 5 Android Nkpọrọgwụ File Manager
Top 5 Android Ohere Manager: Multi-Ohere-ekwe Omume
Android nkebi Manager: Olee otú nkebi SD Kaadị maka Android
Olee otú Naghachi ehichapụ ozi na HTC EVO 4G
Olee otú Naghachi Lost Photos / Video si HTC Wildfire
Otú nyefee Photos, SMS, Video na Ndi ana-akpo si Symbian ka Android
Olee otú Play ihe AVI File na ihe akporo ekwentị
> Resource> Android> 3 Software Iji jikọọ Android ka Mac Mfe